Fananana vorona mpifindra monina : Misarika mpizahatany maro eto Madagasikara
Zava-dehibe ny fananan’i Madagasikara vorona mpifindra monina, satria dia mitondra vokatsoa maro ho an’ny firenena izy ireny. Ankoatra ny fahafinaretan’ny maso mantsy, dia mampiakatra ny harin-karenantsika ary mampitombo ny vola miditra amin’ny kitapom-bolam-panjakana amin’ny alalan’ny …Tohiny
Ambatomainty : Vehivavy maty voadonan’ny fiara taksibe
Vehivavy iray no maty tsy tra-drano rehefa voadonan’ny fiara taksibe zotra H mianavaratra ny alarobia lasa teo tokony ho tamin’ny 09 ora sy sasany maraina. Araka ny loharanom-baovao, dia handeha hiampita ny arabe ity niharan-doza …Tohiny
Tonga amin’ny tsontsori-mamba hisarahana ireo ekipa efatra tafakatra hiatrika ny lalao manasa-dalana amin’ny « Festival Moudjangaya M’chimé» eo amin’ny taranja basikety, sokajy N1A lehilahy. Hetsika mizotra amin’izao fotoana izao ao Mahajanga, ao amin’ny Complexe Sportif. …Tohiny
Aretina Alzheimer : An’hetsiny no vidin’ny fanafody
Raha olona efa nahazohazo taona foana hatramin’izay no fantatra sy hita voan’ny aretina tsy fitadidiana na Alzheimer, dia fantatra amin’izao fotoana izao fa miha-tanora ireo olona efa voany. Araka ny filazan’ny filoha mpanorina ny fikambanana …Tohiny